Complex ???? - Sajhedari Daily
एउटा धेरै राम्रो कथन छ Life is Simple & Straight, we Creat various Compound & Complex !!! हो र ??? होइन र ??? धेरै कठीन प्रश्न छ । म यहाँ एउटा घटना उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
म मेरो छोरी Standard2मा हुँदा उसले सोधेको गणितको हिसाब गल्ती वताएछु अनि उ स्कूलबाट फकर्ने वित्तिकै रिसउर्दै भनि “बुवा हजुर यति ठूलो डा. रे ?? र मेरो हिसाब नि आएन हजुरलाई ।।।। म एउटा विरामी हेर्दै थिए, विरामीले हास्दै सध्यो के भो ??? नानी ।।।।
अनि फेरी रिसाउदै भनिन बुवालाई मेरो हिसाब नि Solve गर्न आएन ??? म र त्यो विरामी खुबै हास्यौ, अन्त्यमा त्यो विरामीले भन्यो आज कलको बच्चा पनि स्मार्ट छन सर ???” कम्प्यूटर यूग ??? हुन त मेरो छोरी को विचार राय आज पनि मेरो Mathematics को ज्ञानलाई लिएर त्यस्तै छ जस्तै छ जस्तो कि उसको Class को हिसाब गल्ती भए भौ नै ??? म फेरी एउटा प्रसंग उल्लेख गन चाहन्छु ।
भर्खरैको कोरोना पिडितलाई राहत बाडदै थियो । गाउँभरी सबैलाई राहत दियो मेरो घरमा राहत दिएन । म घर पुग्दा परिवारलाई सोधे, “हामीलाई राहत दिएन” ??? अनि मेरो छोरोले जवाफ दियो “लाइनमा बसेर नाम लेखाउने लाई मात्र राहत दिदै थियो । अनि मैले फेरी सोधे तिमीले बसेर नाम लेखाएन ??” अनि उ मेरो छोरो झर्किदै भन्यो “तपाई यति ठूलो डा. हुनु हुन्छ, सामाजमा धाक रवाफ छ अनि म कसरी लाइनमा बसेर राहतको लागि नाम लेखाउने ???”
एउटा अर्को रोचक प्रसंङ्ग म मेरो छोरा संग यसो घुमन बहिर गयौ अनि मैले मेरो छोरासित चिया खान एउटा होटलमा गयौं । चिया खादै यसो केदी स्नैक्स और्डर गरयौ । चिया खाएपछि मैले होटेलवाला सित कति पैसा भयो भनेर सोधे ??? उसले ५० दिनुस भन्यो, मैले सय को नोट दिए ।
पसलेले ५० रु फिर्ता गर्नै लाग्दा मेरो छोरोले भन्यो साहुजी “तपाइको पहिलेको रु ३० बाँकी छ, त्यो कटाउनु होला ???” पसलले भन्यो मलाई त्यो पैसाको समझ्ना छैन ??? मेरो छोरोले भन्यो मैले स्नैक्स खाएको हु । अनि पसलेले २० रु फिर्ता दियो ।। होटेलबाट घरतिर लागे पछी मैले छोरोलाई सोधे ।।
त्यो पसलेले त ३० रु बिर्सैको थियो ??? तिमीले किन भन्यौ ??? अनि मेरो छोरो ले जंगिदै भन्यो, “गरीबको सितैमा खानु हुदैन । पाप लाग्छ ।
अनि उसले कही कतै मेरो इमन्दारीको जाँच गरेको भए के हुन्थ्यो ???” अरु को खाएर विर्सन हुदैन, तपाईलाई थाहा छैन ??? यत्रो ठूलो डा. रे ???? OMG, We should Analyze & Remember that life is simple & Straight, we creat various stigma & discrimination, compound & complex ???? ….